Zaridaina sy tany efitra - Church of God of Switzerland Switzerland
lahatsoratra > Day-by-Day > Gardes and deserts
"Fa nisy zaridaina teo amin'ilay nanomboana an'i Jesosy tamin'ny hazofijaliana, ary teo amin'ny saha nisy fasana vaovao, izay tsy mbola nandevenana olona" Jaona 19:41. Ny ankamaroan'ny fotoana voafaritra teo amin'ny tantaran'ny Baiboly dia nitranga tany amin'ny toerana izay toa hita taratra ny toetoetran'ny zava-nitranga.
Ny fotoana voalohany toy izany dia niseho tao amin'ny zaridaina tsara tarehy izay nametrahan'Andriamanitra an'i Adama sy Eva. Mazava ho azy fa manokana ny zaridainan'i Edena satria zaridain'Andriamanitra; tany no nahitanao azy nitsangatsangana tamin'ny ora hariva. Avy eo dia nilalao ny menarana, niezaka ny nisaraka tamin'i Adama sy i Eva tamin'ny namorona azy. Ary araka ny fantatsika dia noroahina avy tao anaty saha izy ireo sy ny fanatrehan'Andriamanitra ho tontolon'ny fahavalo feno tsilo sy tsilo satria efa nihaino ny menarana izy ireo ary nandika ny baikon'Andriamanitra.
Ny hetsika lehibe faharoa dia niseho tany an-tany efitra izay niatrehan'i Jesosy, Adama faharoa. Inoana fa ny zava-niseho tamin'io fifandonana io dia ny tany lemaka Jodianina, toerana mampidi-doza sy tsy mety. Hoy ny filazan'ny Baibolin'i Barclay: “Manodidina an'i Jerosalema eo afovoan'i lemaka afovoany sy ny Ranomasina Maty ny tany efitra… Faritra misy fasika mavo, riaka ary potika miparitaka. Azonao atao ny mahita zoro miforodona misy vato, sakam-tendrombohitra izay mihazakazaka amin'ny lafiny rehetra. Ny havoana dia tahaka ny vovoka; mihena ny tampon-kafatra mipoaka, tsy misy volo ary milentika ... Mamirapiratra sy manempotra amin'ny hafanana toy ny ao anaty lafaoro lehibe izy io. Ny efitra dia mipaka hatrany amin'ny Ranomasina Maty ary milatsaka 360 metatra, faritra morontsiraka, vatokely sy havan-tany, voahosihosin'ireo hantsam-bato sy làlana mivezivezy ary farany dia fiodinana tampoka any amin'ny Ranomasina Maty ». Izany no sary mety ho an'ny tontolo latsaka, izay ny Zanak'olona dia nanohitra ny fakam-panahy rehetra nataon'i Satana irery ary tsy nisy sakafo, izay nikasa ny hanalavitra azy amin'Andriamanitra. Na izany aza dia tsy nivadika i Jesosy.
Ary ho an'ny hetsika manan-danja indrindra, ny sehatra dia niova tamin'ny fasana vato nalaina tao anaty vatolampy tsy misy fotony. Ny vatan'i Jesosy dia nentina teto taorian'ny nahafatesany. Tamin'ny fahafatesany dia nandresy ny ota sy ny fahafatesana izy ary nanala an'i Satana. Nitsangana tamin'ny fahafatesana izy - ary tao amin'ny saha indray. Diso hevitra i Maria Magdalena fa izy dia mpanao zaridaina mandra-niantsoany azy ny anarany. Fa Andriamanitra izy izao, nandeha tamin'ny hatsiaka vao maraina, vonona ary afaka mitarika ireo rahalahiny sy anabaviny hiverina amin'ny hazon'aina. Eny, haleloia!
Ry Mpamonjy ô, noho ny sorona feno fitiavana nataonao dia namonjy anay tsy ho any an-tany ain'ity tontolo ity ianao, mba hiarahanao ny lalana miaraka aminay ankehitriny, isan'andro ary mandrakizay. Noho izany dia te-hamaly amin'ny fankasitrahana feno hafaliana izahay. amena